လမ်းဦးတိုက်မှာ နေသူတွေ ချမ်းသာကြပါစေ – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
565812 Views so far
August 12, 2019 နေ့
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်းနေဘက် ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သော ခင်မမကြီးဆိုသူ အပျိုကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၎င်းသည် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားဘက်၌ လုပ်ငန်းများထူထောင်ထား၏။ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းအား မနောမယ လက်ဖက်ရည်ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရလေ၏။
လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း ၎င်းက –
“နင့်ကို သတိရလို့ရန်ကုန်ရောက်တုန်း ၀င်လာခဲ့တာဟ . . .” ဟုပြောလျှင် ကျွန်ုပ်က သောက်လက်စ စီးကရက်တိုကို ဆေးလိပ်ခံခွက်အတွင်းသို့ ထိုးချေလိုက်ရင်း –
“အပိုတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဟာ . . .၊ ငါဗေဒင်ဆရာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ငါ့ဆီကို သတိရလို့ အလည်လာတဲ့သူဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူး၊ ဗေဒင်မေးချင်လို့ လာတဲ့လူပဲ တွေ့ဘူးတယ် . . .” ဟု ပြောပြောဆိုဆို ဖြင့်ရယ်မောလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ခင်မမကြီးလည်း ရှေ့သွားအားလုံးပေါ်သည်အထိ ပြုံးဖြီးဖြီးဖြင့် ရယ်လေ၏။ အားရအောင် ရယ်ပြီးသည့်နောက်တွင်မှ –
“အေးပါဟယ် …လောကကြီးမှာ လူမှုရေးဆိုတာကလည်း ရှိသေးလေတော့ အဲဒီလိုလေး စကားလှအောင်တော့ ကြည့်ပြောရတာပေါ့ဟယ် …၊ တကယ်ကတော့ ဗေဒင်ဆရာကြီးဆီကို ဗေဒင်ကိစ္စ မေးချင်လို့လာတာပေါ့ . . .” ဟုပြန်၍ပြောလေ၏။ ကျွန်ုပ်က –
“ကဲပါ . . .ဘာကိစ္စသိချင်လို့တုံး . . .” ဟုမေးလိုက်ရာ သူငယ်ချင်းခင်မမကြီးက –
“ဒီလိုပါဟယ် . . .၊ ဟိုတလောတုန်းက အခြေအနေပေးလို့ မြေကွက်လေးတစ်ကွက် ၀ယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဟ . . .၊ ဈေးကလေးကလည်း သင့်လို့ပေါ့လေ . . .၊ ဒါပေမယ့် အခုမှ သတိထားမိတာက အဲဒီမြေကွက်က ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတဲ့ လမ်းဦးတိုက်ဆိုတဲ့ မြေကွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလို လမ်းဦးတိုက်နေရာမျိုးမှာ နေရင် ခိုက်တတ်တယ်ဆိုဟဲ့ . . .၊ အဲဒါ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ဆရာကြီးဆီကို တကယ်သတိရပြီး လာခဲ့တာပါတဲ့ရှင် . . .” ဟု ရှင်းပြလေ၏။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်က –
“ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဟဲ့ . . .၊ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတော့ . . . မြေလွတ်တွေကလည်းပေါတယ်၊ မြေကွက်တွေကလည်း အကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့ အိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး ဆောက်မယ်၊ ဘယ်လိုမြေမျိုးဆိုရင် လူမနေဘူး …၊ အဲဒီလို ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်း များတာပေါ့ဟယ် . . .၊
ဒီခေတ်ဒီအခါမှာကတော့ . . .ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ၊ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့နေရာလေးမှာပဲ မြေ၀ယ်ကြ၊ အိမ်ဆောက်ကြ လုပ်ရတာပေါ့ဟယ် . . .၊ အရိုးများသလေး၊ ချေးခါးသလေး သိပ်ပြီး လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ . . .။
အဲဒီတော့. . .အခု နင်ကြုံသလို လှေဦးတိုက် လှည်းဦးတိုက်၊ လမ်းဦးတိုက်နေရာမျိုးတွေမှာ မဖြစ်မနေ နေရတော့မယ် ဆိုလာခဲ့ ရင် …ကောင်းတာကတော့ အိမ်ရှေ့ မျက်နှာစာ တစ်နေရာရာမှာ အုတ် အဟောင်းတို့၊ သစ်အဟောင်းတို့၊ သံအဟောင်းတို့ စသည်ဖြင့် ပစ္စည်းအဟောင်းတစ်ခုခုထည့်ပြီး ဆောက်ရတယ်။ အဲဒါဆိုရင် လမ်းဦးတိုက်မို့လို့ ခိုက်တတ်တဲ့သဘာဝကနေ သက်သာလွတ်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ . . . ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာမှာ လမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး ကြည့်မှန်သေးသေးလေးတစ်ချပ် ချိတ်ထား လိုက်ရတယ်။ အဲဒါဆိုရင်လည်း မကောင်းတဲ့ အခိုက်အညံ့တွေ တန်ပြန် ပြန်ထွက်သွားစေပါလိမ့်မယ် . . . ” ဟု ပြောပြလိုက်ရလေ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း ခင်မမကြီးလည်း ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးဖြင့် ဟန်နှင့်ပန်နှင့်ဖိရင်း –
“အောင်မယ်လေး . . .တော်ပါသေးရဲ့ဟယ် ၊ အဲဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပြီးသွားလို့ ငါ့မှာဖြင့် ဘယ်လိုများလုပ်ရပါ့မလဲလို့ စိုးရိမ်လိုက်ရတာဆိုတော့ဟယ် . . .” ဟု သက်ပြင်းကိုချရင်း ပြောလေတော့၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က –
“ပြောလက်စနဲ့ တစ်ခါတည်းပြောလိုက်ဦးမယ် . . .၊ အကောင်းဆုံးကတော့ အဲဒီလို လမ်းဦးတိုက် နေရာတွေမှာ လူနေအိမ်သက်သက် ဆောက်တာထက်စာရင် ဆိုင်တစ်ခုခု ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲဟဲ့၊ နင်တို့ပဲ ဈေးရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ဆိုင်ခန်းငှားထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲဟဲ့ . . .။
အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် လမ်းဦးတိုက်လို နေရာတွေဟာ အများရဲ့အမြင်မှာ ထင်သာမြင်သာ ရှိနေတတ်လို့ဆိုင်ပြိုင်တွေ ဘာတွေများရှိရင် ကိုယ့်ဆိုင်ကို လူတွေကပိုပြီးရောက်လာတတ်တယ်။ အခြားသောနေရာတွေထက် ဈေးပိုရောင်းရလေ့ရှိတယ်။
ပြီးတော့ . . .ကိုယ့်မိသားစုလေးတင် သီးသန့်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လာကြတဲ့ ခုနစ်ရက်သားသမီးပေါင်းစုံ ၀င်ထွက်ပတ်သက်နေတဲ့ နေရာဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အခိုက်အညံ့တွေခမျာလည်း ဘယ်သူ့ကိုခိုက်ရ၊ ဘယ်သူ့ကိုညံ့ရတော့မှန်း မသိတော့ဘဲ မျက်စိလည်ပြီး ထွက်သွားတော့တာပေါ့ဟယ် . . .။
အဲဒီတော့ . . .တကယ်လို့များ ကိုယ်ဟာ လမ်းဦးတိုက်နေရာမှာ နေခဲ့ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာ ဈေးဆိုင်တစ်ခုခုသာ ဖွင့်လိုက်ပေတော့ . . .၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုသာ ထူထောင်လိုက်ပေတော့ . . .အဲဒါဆိုရင် အညံ့အခိုက်လည်း ပြေစေမယ့်အပြင် စီးပွားတက်ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကိုပါ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျား . . .” ဟု ပြောလိုက်ရလေ၏။
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း ခင်မမကြီးလည်း –
“ဟုတ်ပြီဟေ့ . . .ဟုတ်ပြီ၊ နေကပူ ကားကကြပ်နဲ့ နင့်ဆီကိုလာရတာတော့ လာရကျိုးနပ်သွားပြီဟေ့ . . .” ဟု အားပါးတရ ရေရွတ်ရင်း သူ၏ရှေ့မှ လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို ကောက်ယူကာ ခွက်ထဲမှ လက်ကျန်လက်ဖက်ရည်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး မော့ချလိုက်ပါလေတော့သတည်း။
တဈနသေ့၌ ကြှနျုပျထံသို့ ကြှနျုပျ၏ ကြောငျးနဘေကျ ငယျသူငယျခငျြးတဈဦးဖွဈသော ခငျမမကွီးဆိုသူ အပြိုကွီးတဈဦး ရောကျရှိလာလေ၏။ ၎င်းငျးသညျ နပွေညျတျော ပဉျြးမနားဘကျ၌ လုပျငနျးမြားထူထောငျထား၏။ ကြှနျုပျသညျ ၎င်းငျးအား မနောမယ လကျဖကျရညျဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံရလေ၏။
လကျဖကျရညျသောကျရငျး ၎င်းငျးက –
“နငျ့ကို သတိရလို့ရနျကုနျရောကျတုနျး ဝငျလာခဲ့တာဟ . . .” ဟုပွောလြှငျ ကြှနျုပျက သောကျလကျစ စီးကရကျတိုကို ဆေးလိပျခံခှကျအတှငျးသို့ ထိုးခလြေိုကျရငျး –
“အပိုတှပွေောမနစေမျးပါနဲ့ဟာ . . .၊ ငါဗဒေငျဆရာဖွဈပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာ ငါ့ဆီကို သတိရလို့ အလညျလာတဲ့သူဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူး၊ ဗဒေငျမေးခငျြလို့ လာတဲ့လူပဲ တှဘေူ့းတယျ . . .” ဟု ပွောပွောဆိုဆို ဖွငျ့ရယျမောလိုကျလေ၏။ ထိုအခါ ခငျမမကွီးလညျး ရှသှေ့ားအားလုံးပျေါသညျအထိ ပွုံးဖွီးဖွီးဖွငျ့ ရယျလေ၏။ အားရအောငျ ရယျပွီးသညျ့နောကျတှငျမှ –
“အေးပါဟယျ …လောကကွီးမှာ လူမှုရေးဆိုတာကလညျး ရှိသေးလတေော့ အဲဒီလိုလေး စကားလှအောငျတော့ ကွညျ့ပွောရတာပေါ့ဟယျ …၊ တကယျကတော့ ဗဒေငျဆရာကွီးဆီကို ဗဒေငျကိစ်စ မေးခငျြလို့လာတာပေါ့ . . .” ဟုပွနျ၍ပွောလေ၏။ ကြှနျုပျက –
“ကဲပါ . . .ဘာကိစ်စသိခငျြလို့တုံး . . .” ဟုမေးလိုကျရာ သူငယျခငျြးခငျမမကွီးက –
“ဒီလိုပါဟယျ . . .၊ ဟိုတလောတုနျးက အခွအေနပေေးလို့ မွကှေကျလေးတဈကှကျ ဝယျဖွဈလိုကျတယျဟ . . .၊ ဈေးကလေးကလညျး သငျ့လို့ပေါ့လေ . . .၊ ဒါပမေယျ့ အခုမှ သတိထားမိတာက အဲဒီမွကှေကျက ရှေးလူကွီးတှပွေောကွတဲ့ လမျးဦးတိုကျဆိုတဲ့ မွကှေကျကွီးဖွဈနတေယျ။ အဲဒီလို လမျးဦးတိုကျနရောမြိုးမှာ နရေငျ ခိုကျတတျတယျဆိုဟဲ့ . . .၊ အဲဒါ ငါဘယျလိုလုပျရမှနျးမသိတာနဲ့ ဆရာကွီးဆီကို တကယျသတိရပွီး လာခဲ့တာပါတဲ့ရှငျ . . .” ဟု ရှငျးပွလေ၏။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျက –
“ဒါက ဒီလိုရှိတယျဟဲ့ . . .၊ ဟိုးရှေးရှေးတုနျးကတော့ . . . မွလှေတျတှကေလညျးပေါတယျ၊ မွကှေကျတှကေလညျး အကယျြကွီးတှဆေိုတော့ အိမျဆောကျတော့မယျဆိုရငျ ဘယျဘကျကိုလှညျ့ပွီး ဆောကျမယျ၊ ဘယျလိုမွမြေိုးဆိုရငျ လူမနဘေူး …၊ အဲဒီလို ရှေးခယျြဖို့အခှငျ့အလမျး မြားတာပေါ့ဟယျ . . .၊
ဒီခတျေဒီအခါမှာကတော့ . . .ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ ပိုကျဆံလေးနဲ့ ၊ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ သငျ့တျောတဲ့နရောလေးမှာပဲ မွဝေယျကွ၊ အိမျဆောကျကွ လုပျရတာပေါ့ဟယျ . . .၊ အရိုးမြားသလေး၊ ခြေးခါးသလေး သိပျပွီး လုပျလို့မရတော့ဘူးလေ . . .။
အဲဒီတော့. . .အခု နငျကွုံသလို လှဦေးတိုကျ လှညျးဦးတိုကျ၊ လမျးဦးတိုကျနရောမြိုးတှမှော မဖွဈမနေ နရေတော့မယျ ဆိုလာခဲ့ ရငျ …ကောငျးတာကတော့ အိမျရှေ့ မကျြနှာစာ တဈနရောရာမှာ အုတျ အဟောငျးတို့၊ သဈအဟောငျးတို့၊ သံအဟောငျးတို့ စသညျဖွငျ့ ပစ်စညျးအဟောငျးတဈခုခုထညျ့ပွီး ဆောကျရတယျ။ အဲဒါဆိုရငျ လမျးဦးတိုကျမို့လို့ ခိုကျတတျတဲ့သဘာဝကနေ သကျသာလှတျကငျးစပေါလိမျ့မယျ။
နောကျတဈခုကတော့ . . . ကိုယျ့အိမျရှမေ့ကျြနှာစာမှာ လမျးဘကျကိုလှညျ့ပွီး ကွညျ့မှနျသေးသေးလေးတဈခပျြ ခြိတျထား လိုကျရတယျ။ အဲဒါဆိုရငျလညျး မကောငျးတဲ့ အခိုကျအညံ့တှေ တနျပွနျ ပွနျထှကျသှားစပေါလိမျ့မယျ . . . ” ဟု ပွောပွလိုကျရလေ၏။ ထိုအခါ ကြှနျုပျ၏သူငယျခငျြး ခငျမမကွီးလညျး ရငျဘတျကို လကျကလေးဖွငျ့ ဟနျနှငျ့ပနျနှငျ့ဖိရငျး –
“အောငျမယျလေး . . .တျောပါသေးရဲ့ဟယျ ၊ အဲဒီလောကျလှယျလှယျကူကူနဲ့ ပွီးသှားလို့ ငါ့မှာဖွငျ့ ဘယျလိုမြားလုပျရပါ့မလဲလို့ စိုးရိမျလိုကျရတာဆိုတော့ဟယျ . . .” ဟု သကျပွငျးကိုခရြငျး ပွောလတေော့၏။ ထိုအခါ ကြှနျုပျက –
“ပွောလကျစနဲ့ တဈခါတညျးပွောလိုကျဦးမယျ . . .၊ အကောငျးဆုံးကတော့ အဲဒီလို လမျးဦးတိုကျ နရောတှမှော လူနအေိမျသကျသကျ ဆောကျတာထကျစာရငျ ဆိုငျတဈခုခု ဖှငျ့လိုကျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲဟဲ့၊ နငျတို့ပဲ ဈေးရောငျးတာဖွဈဖွဈ၊ အခွားတဈယောကျယောကျကို ဆိုငျခနျးငှားထားတာပဲဖွဈဖွဈ၊ အဲဒီလိုလုပျလိုကျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲဟဲ့ . . .။
အဲဒီလိုလုပျလိုကျရငျ လမျးဦးတိုကျလို နရောတှဟော အမြားရဲ့အမွငျမှာ ထငျသာမွငျသာ ရှိနတေတျလို့ဆိုငျပွိုငျတှေ ဘာတှမြေားရှိရငျ ကိုယျ့ဆိုငျကို လူတှကေပိုပွီးရောကျလာတတျတယျ။ အခွားသောနရောတှထေကျ ဈေးပိုရောငျးရလရှေိ့တယျ။
ပွီးတော့ . . .ကိုယျ့မိသားစုလေးတငျ သီးသနျ့နတောမဟုတျတော့ဘဲ ဈေးရောငျးဈေးဝယျလာကွတဲ့ ခုနဈရကျသားသမီးပေါငျးစုံ ဝငျထှကျပတျသကျနတေဲ့ နရောဖွဈသှားတဲ့အတှကျ အခိုကျအညံ့တှခေမြာလညျး ဘယျသူ့ကိုခိုကျရ၊ ဘယျသူ့ကိုညံ့ရတော့မှနျး မသိတော့ဘဲ မကျြစိလညျပွီး ထှကျသှားတော့တာပေါ့ဟယျ . . .။
အဲဒီတော့ . . .တကယျလို့မြား ကိုယျဟာ လမျးဦးတိုကျနရောမှာ နခေဲ့ရမယျဆိုရငျ အဲဒီနရောမှာ ဈေးဆိုငျတဈခုခုသာ ဖှငျ့လိုကျပတေော့ . . .၊ လုပျငနျးတဈခုခုသာ ထူထောငျလိုကျပတေော့ . . .အဲဒါဆိုရငျ အညံ့အခိုကျလညျး ပွစေမေယျ့အပွငျ စီးပှားတကျခမျြးသာခွငျးအကြိုးကိုပါ ရရှိစပေါလိမျ့မယျတဲ့ဗြား . . .” ဟု ပွောလိုကျရလေ၏။
ထိုအခါ ကြှနျုပျ၏သူငယျခငျြး ခငျမမကွီးလညျး –
“ဟုတျပွီဟေ့ . . .ဟုတျပွီ၊ နကေပူ ကားကကွပျနဲ့ နငျ့ဆီကိုလာရတာတော့ လာရကြိုးနပျသှားပွီဟေ့ . . .” ဟု အားပါးတရ ရရှေတျရငျး သူ၏ရှမှေ့ လကျဖကျရညျခှကျကို ကောကျယူကာ ခှကျထဲမှ လကျကနျြလကျဖကျရညျကို ကကြေနြေပျနပျကွီး မော့ခလြိုကျပါလတေော့သတညျး။